Phantse bonke abo bazama ukunciphisa ubunzima, ubuncinane kanye bazama ukukwenza kunye nebhande lokulahleka kwesisindo. Ibhanti ithandwa kakhulu kutshanje kwaye ipapashwa kakhulu kwiimidiya. Amashishini athengisa abathengi ukuba ibhande likwazi ukulwa ne cellulite kwaye liyakwazi ukulahla iipounds eziligidi ngokukhawuleza kwaye kungekho mzamo omkhulu. Kodwa ngaba kukho umphumo onjalo ukususela kwibhande, kwaye ukuba kunjalo, yiyiphi ibhande endiyimkhethe?
Amanxweme amaninzi okwenza umsebenzi wokulahlekelwa kwesisindo ngokwemiqathango elandelayo: ibhanti igqitywe kuloo ndawo kunye ne-fat deposits, emva koko kukho ukunyuka kwamaqondo okushisa, okubonelela utshintsho kwintlukwano ye-oksijini phakathi kweeseli. Le nqubo ingenxa yokuba iindawo ezinzulu zolusu, i-dermis kunye ne-hypoderm zitshiswa ngokuhlukileyo. Ukuba iinqatha zesalathisi zitshisa, ngoko inkqubo ye-lipid cleavage ikhawulezileyo, kwaye i-fluid excess and extras are removed from the tissues. Ngenxa yoko, ukunciphisa ngokunyuka kwamanqatha omzimba.
Kukho nezinye iibhanti ezithintela i-cellulite ezingabonakali kwindawo yomzimba - zihlalisa iindawo ezinamanci. Ngokubetha, ibhanti inikezela utshintsho lweenqatha zibe luhlobo lokumiswa, olwenziwe lula phantsi komzimba kwaye lupheliswa ngendlela yendalo.
Umgaqo wokusebenza kwelo bhanti uchazwe ngasentla. Kufuneka kuphawulwe kuphela ukuba yenza ngokufanayo kwi-massager ye-hardware ehambileyo, iindleko zoqeqesho zibiza ngaphezu kwebhanti, kwaye kunzima ukufaka indlu. Ibhanti ye-anti-cellulite inokuthi ithathwe nawe kuyo nayiphi na indawo, kwaye umphumo wokugqoka unokunika iziphumo ezilungileyo, nokuba ngaba yimaminithi emini ngosuku.
Ukongezelela, i-vibropoies iyakuthanda kakuhle isikhumba kunye ne-cellulite, kwaye ngoko isenokusetyenziswa kwisiqhankqalazo kunye nakwiindawo zokulwa ne-cellulite.
Ukuvelisa ibhanti yokulahleka kwesisindo kwi-rabra eqinile. Kungekudala, i-rabra ye-foam isetyenzisiweyo, apho inxalenye yendawo inokwakhiwa kwamabhulebhu emoyeni. Abavelisi bathi loo rabhothi inesakhiwo esihle sokutshiza. Umgaqo wokusebenza kwelo bhanti uqhutyelwa ngokucwangciswa kwesikimu sobushushu, oku kuchazwe ngasentla, ngoko kuya kucingelwa ukuba kuya kulwa ngokufanelekileyo ngokwaneleyo.
Iibhanti ze-Neoprene ezinezibane zombane
Lo ngumzekelo ophuculweyo webhanti ye-neoprene. Ngaphakathi kweli bhande i-heater yakhiwe kuyo, ebangela ukufudumeza ngokukhawuleza komzimba, okubonisa ukuba umphumo webhanti kufuneka ubonakale ngokukhawuleza. Olu hlobo lwebhanti lupapashwa kakhulu kwi-TV nakwi-intanethi. Umzekelo welo bhanti unokuba yi-"sauna-belt" eyaziwayo, okanye ibhanti ye-sauna.
Eli bhinti lenza imisebenzi emibini kwangoko: lenza i-vibro-massage kwaye iyatshisa umzimba. Eli bhanti linye yeyona ndlela iphumelelayo, kodwa akufanelekile ukucinga ukuba iya kusindisa zonke iipounds ezikhoyo.
Indlela yokukhetha ibhande elincinci
Okokuqala, kubalulekile ukucacisa imiqathango yokusetyenziswa. Ukusetyenziswa ekhaya, ungakhetha naziphi na iintlobo. Ibhanti ye-Neoprene, kuba ayibonakali phantsi kweengubo ezingcolileyo, inokugqithwa ngexesha lomsebenzi. I-Vibropome imnandi kakhulu, ngoko kufuneka isetyenziswe ngokulumkileyo kubantwana abancinci kunye nokusetyenziswa emsebenzini. Ukugqoka amabhanti e-sauna kukhokelela ekujuleni okukhulu, kwaye ngoko emva kweeklasi kuya kufuneka ukuba utshintshe iimpahla. Ngenxa yoko, ininzi yazo yonke ifanelekile ukusetyenziswa kwekhaya, umzekelo, ngokuhlwa.
Omnye umlinganiselo wexabiso lebhanti. Awukwazi ukuthenga ibhanti yekhwalithi ngokungabi nantoni. Ngokuqhelekileyo kwiindawo zokuthengisa kwi-intanethi zinikezelwa ngamabhande, oku, okomzekelo, kwi-pharmacy amaninzi amaninzi. Sinokucinga ukuba oku kuyimfesane kwaye akunakwenzeka ukuba kuya kubakho na ukusetyenziswa kwelo bhanti. Kufuneka uqaphele ukuba ungathengi i-Chinese counterfeit. Kungcono ukuhlawula encinci, kodwa ukuthenga umgangatho, into ebhalwe ngayo. Kwi-belly neoprene, akunakwenzeka ukuba abathengisi baya kuba neesatifikethi, kodwa kwibhande lombane, "Ibhanti ye-Sauna-belt" okanye ibhanti ye-massage, unokukhusela ngokuqinisekileyo isatifikethi esiya kuqinisekisa isiphumo sempumelelo sokuthenga.
Indlela yokuLahla i-cellulite ngee-Exercises
I-Anti-cellulite body scrub
Amacwecwe e-Chinese myaosi
Uphi i-ultrasound esetyenziswayo?
Ukupheka kweyeza zamasiko ngokubhekiselele kwi-cellulite
I-Wraps kunye nobusi kunye nekhofi
Indlela yokubuyisela iinwele eziphilileyo kwindlela ejongene kakuhle ekhaya?
Yintoni indoda okanye inkwenkwe yangaphambili ephuphayo?
Ukuzalwa kokuqala: kunye nabantwana okanye abadala?
Inyosi i-goulash kwi-multivark
Indlela zokufundisa zokufunda umntwana
U-Timati no-Alyona Shishkov bacelwa ukuba bahlaziywe intsha
Unyango lwe-lichen ebomvu
Izizathu zesikhumba esomileyo kunye nemigaqo eyisiseko yokunyamekela kwesikhumba esomileyo
Amazwi kunye nemibandela uRenata Litvinova
Ukuya eholide, ndimele ndithathe ntoni endleleni
Iingoma ezinobungozi malunga nokunyangwa kwamayeza
Iintsuku ezingama-28 okanye zonke malunga nomjikelezo
Ikomityi yekhofi eshushu